Somaliland Oo U Digtay Warbaahinta Gudaha & Ineysan baahin karin Wararka… – Kismaayo24 News Agency
Somaliland Oo U Digtay Warbaahinta Gudaha & Ineysan baahin karin Wararka…
Arimaha Bulshada Breaking News Somali News Top News
by admin 10th July 2018 0144
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Somaliland ayaa loogu digay warbaahinta ka hawlgasha Somaliland in aysan baahin Karin warar aan ka soo bixin guddida nabadeynta ee Ceel-afweyn .
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Warbaahinta ka howlgasha Somaliland aysan tabin Karin xaaladda ka jirta deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamo ka kala tirsan Somaliland iyo Puntland.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa u qoran sidaan:
“siraha ciidammadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ka reeban saxaafaddu inay wax ka qorto ama ka tebiso fasax la’aan, waana mid ay ka siman yihiin warbaahinta dunidda oo dhan, waayo waxay xeeriyaan shuruucda iyo anshaxa saxaafadda, waxayna iska ilaaliyaan wax kasta oo la xidhiidha hawlaha ciidammada, waxaanay baahiyaan kaliya wixii warar ah ee ka soo baxa talisyadooda.
Sidaas awgeed, waxaanu ku wargelinaynaa, kuna adkaynaynaa saxaafadda ka hawlgasha JSL inay ka waantoobaan wax ka sheegga hawlaha ciidammada siiba xaaladda dagaal ee ka taagan Tuka-raq ee ay isku horfadhiyaan ciidanka qaranka iyo ka Soomaaliya.
Wararka kaliya ee laga tabin karaa jiidaas dagaalku ka taagan yahay ee Tuka-raq waa midka ka soo baxa taliska ciidanka ama xukuumadda, waxaana reebban in warar malo-awaal iyo kuwo laga soo xigtay meelo kale oo aan ahayn ilaha rasmiga ah laga sii daayo guud ahaan warbaahinta dalka”.
Dowlada Somalia oo Hub aad u badan ku wareejineysa Mukhtaar Roobow
DEG DEG; Wariye caan ah oo goordhow isku day dil ah ka badbaaday + Sababta
Maxaabiis Dalka Libya laga Keenay Oo Maanta Muqdisho laga Soo Dajinayo
Sakariye Sakariye 7th March 2018
Wax badan ka ogow Mustaqbalka Ciidamada Imaaraadka tababarka ay siiyaan hala u ku danbeyn doono..
Fariimo Digniin ah oo Moobeelada loogu diray Xildhibaanada Galmudug !! (Aqriso Fariintaasi) yaasa u Diray
admin 1st July 2015 27th August 2015